‘बागदरबार नभत्काऊँ’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
रातो स्टिकर लगाइएका सर्वाेच्च अदालत, गद्दी बैठक, शीतल निवास जोगाइयो भने बागदरबार किन नजोगाउने ?
काठमाडौँ — बागदरबार जोगाउनुपर्ने आवाज काठमाडौं महानगरभित्रै उठ्न थालेको छ । महानगरको २७ औं बोर्ड बैठकमा वडा अध्यक्षहरूले कलाकृतिले भरिपूर्ण बागदरबार जोगाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । बागदरबार रहेकै ११ वडाका अध्यक्ष हिरालाल तन्डुकारलगायतले बागदबार जोगाउनुपर्ने अडान राखे ।
जीर्ण भएका अन्य दरबारसमेत जोगिएको अवस्थामा बागदरबार जोगाउन सकिने उनले बताए । ‘बस्नै नमिल्ने भनेर रातो स्टिकर टाँसिएको सर्वाेच्च अदालत रेट्रोफिट गरेर जोगाइएको छ । गद्दी बैठक जोगियो । शीतल निवास पनि जोगाइएको छ,’ तन्डुकारले भने, ‘बागदरबार किन जोगाउन सकिँदैन ? यसलाई रेट्रोफिट गरेर जोगाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।’
उनले नयाँ भवन बनाउन समय नपुग्ने भएकाले यसलाई नै रेट्रोफिट गरेर पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने बताए । ‘हामी सकेसम्म नयाँ भवन हाम्रै कार्यकालमा निर्माण सम्पन्न गर्छाैं । निर्माण सकेर पहिलो बैठक पनि गर्छाैं भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर अब यो सम्भावना रहेन । हाम्रो कार्यकाल अब साढे तीन वर्षमात्रै बाँकी छ । त्यति समयमा नयाँ भवन बनाउन भ्याइँदैन । अब यसैलाई रेट्रोफिट गर्नुपर्छ । यसो गरियो भने यहाँका कलाकृति पनि जोगिन्छन् । यहाँ भत्काएपछि जोगाउनै नसकिने कलाकृति छन् ।’ उ
नले यो दरबार सम्पदा हो कि हैन भन्ने विवादमा लामो समय अल्झिएको बताए । ‘यो सम्पदा होइन । तर कलाकृतिले भरिपूर्ण दरबार हो । राष्ट्र बैंकले भत्काएको थापाथली दरबार पनि कलाकृतिले सम्पन्न थिए । भत्काउँदा ती मासिए,’ उनले भने, ‘बागदरबारमा पनि यस्तै कलाकृति छन् ।’
यो दरबारलाई जोगाए महानगरलाई आर्थिक भार पनि कम पर्ने उनले बताए । ‘यो दरबार भत्काउने पैसाले रेट्रोफिट गर्न पुग्छ,’ उनले भने, ‘यसले महानगरलाई आर्थिक भार पनि कम पर्छ ।’ बागदरबारसम्बन्धी भएका ४ वटा अध्ययनले भने यसलाई जोगाउन सकिने प्रतिवेदन दिएका छन् ।
प्रकाशित : श्रावण १६, २०७५ ०७:१८
मौलिक हकसम्बन्धी १६ विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित
काठमाडौँ — सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूको प्रचलन गराउन आवश्यक विधेयकलाई संसद्मा छलफलका लागि पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले एक–दुई दिनभित्रै भएभरका विधेयक एकैपटक संसद्मा पेस गर्न लागेको हो ।
त्यस्तै स्वच्छ वातावरणको हक प्रचलनका लागि वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को संशोधन र छुवाछूतविरुद्धको हकलाई कानुनी मान्यता दिन छुवाछूत तथा सामाजिक भेदभावविरुद्धको ऐन २०६८ को संशोधन मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक भनेको संविधानमा लेखिएका हकहरू जनताले प्रत्यक्ष भोगचलन गर्न पाउने कानुन हो,’ कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकाल भन्छन्, ‘त्यसैले यी विधेयक पास भएपछि संविधानबाट प्रत्येक नागरिक लाभान्वित हुनेछन् ।’
संविधानले ३२ वटा मौलिक हक नागरिकका लागि उपलब्ध हुने उल्लेख गरे पनि त्यसको प्रचलन भने तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर त्यसअनुसारै हुने प्रबन्ध गरेको छ । उक्त समयसीमा असोज ३ मा पूरा हुँदै छ । संविधान जारी भएको २ वर्ष ९ महिना ११ दिनका दिन सरकारले सोलोडोलो रूपमा सबै विधेयक ल्याउने निर्णय गरेको हो । जनसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले ज्यादै महत्त्वपूर्ण मानिने मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक बृहत् छलफल गरेर ल्याउनुपर्नेमा त्यो मौकै नमिल्ने गरी हतारमा काम अघि बढाएको भन्दै कानुनविद् तथा अधिकारकर्मीले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
‘सरकारले प्रत्येक मस्यौदामा सार्वजनिक रूपमा छलफल गर्नुपथ्र्याे,’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले भने, ‘समयसीमाभित्रै ल्याएको देखाउन त्यसो गर्ने समय नै दिइएन, जुन राम्रो होइन ।’
मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारले संसद्मा पेस गर्न लागेका यी सबै विधेयकको मस्यौदा आयोगले एकपटक पनि हेर्न पाएको छैन । ‘हामीले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक कस्तो बन्दै छ हेरुँ भनेर पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि देखाएन,’ शर्माले भने । संविधानमा पहिल्यै उद्घोष गरिसकिएका हकहरू कानुनले बन्देज गर्न नमिल्ने र गरेको भए त्यो अदालतले बदर गर्न सक्ने ठाउँ भएकाले ऐनहरू कस्ता आउँदैछन् भनेर धेरै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नभएको उनले बताए ।
संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकहरूको उल्लेख छ । त्यसमध्ये केही हक पहिल्यै प्रचलनमा आइसकेका, केहीको प्रचलन गर्न ऐनहरू संशोधन गरे पुग्ने भएकाले हकहरूसम्बन्धी १४ वटा मात्र नयाँ विधेयक संसद्मा पेस गर्न लागेको हो ।
प्रकाशित : श्रावण १६, २०७५ ०७:१५